Matipi gumi ekufamba neGoogle Chrome pane iOS | IPhone nhau
10 matipi ekufamba neGoogle Chrome pane iOS
Kune vazhinji vedu vanoshandisa yedu iPhone kana iPad sechinhu chikuru chekushandisa kuburikidza neinternet. Zvigadzirwa zvemafoni uye nharembozha zvave kugadzikana zvakakwana kutsigira mazhinji emabasa anogona kuitwa nekombuta. Nharembozha yewebhu kubhurawuza kwakakurumbira zvekuti unogona kufunga kuti pane makwikwi pakati pevashandisi vebrowser, asi hapana. Google Chrome yeIOS inodiwa neve fan, kunyangwe pamidziyo inouya neSafari nekutadza.
1 Iwo akanakisa matipi ekufamba neGoogle Chrome pane iOS (iPhone uye iPad)
1.1 Kurumidza kushandura mapeji ewebhu
1.2 Slide munwe wako pakati pemapeji
1.3 Wona uye uvhare ese tabo
1.5 Bhurawuza incognito
1.6 Chrome Mireza
1.8 Google Apps nekutadza
1.9 Kutsvaga inzwi
1.10 Bvumira desktop version
Iwo akanakisa matipi ekufamba neGoogle Chrome pane iOS (iPhone uye iPad)
Kurumidza kushandura mapeji ewebhu
Kunyangwe zvingave zvisinganzwisisike kana isu tichinyatsoziva mumazana emitauro, chokwadi hachina kufanana neicho kune vazhinji. Saka, paunosangana newebhu peji iri mune mumwe mutauro, Google Chrome inopa sarudzo yekududzira iyo peji mumutauro wako waunoda. Chrome inozviona yega kana peji racho risiri mumutauro wako wekutanga uye inopa kuridudzira muhwindo diki rinobuda. Iwe une sarudzo yekuti "Kwete" kana pombi pa "Dudziro" kuti uone peji rakashandurwa. Iyo dudziro inotora masekondi mashoma, uye peji racho rinoteedzazve neshanduro mumutauro wakasarudzwa. Kubva ipapo unogona kudzokera kumutauro wekutanga webhu nekudzvanya pa «Ratidza chepakutanga».
Kune zvakare diki lever iyo inotaura kuti gara uchidudzira kubva ku «Mutauro». Kana iwe ukaimisikidza iyo nguva yega yega Chrome painowona peji mumutauro iwoyo, inozoishandura. Kana chero nguva iwe uchida kuchinja marongero ako iwe unogona kuenda ku Zvirongwa -> Zvemukati Zvirongwa -> Google Dudziro.
Slide munwe wako pakati pemapeji
Unogona swipe kuenda nekudzoka pakati pemapeji. Isa munwe wako pamucheto wechidzitiro uye tsvedza mukati kuti ufambe pakati pebhu rakavhurika. Ichi chiito inotsiva kukosha kwekugara uchishandisa mabhatani ekumashure nekumberi, pane kutora mukana wechibatiso chekirisito kugona.
Wona uye uvhare ese tabo
Kana iwe uine akawanda matabhu akavhurwa iwe unogona kuona kana kushandura pakati pavo nekudzvanya pane iyo tabo icon. Iyo tabo icon iri padhuze padyo nebha yekutsvaga uye ine huwandu hwematebhu iwe auri kuvhura parizvino.
Tinya pane iro bhatani kuti uvhure ese matabo. Svetera kumusoro kana pasi kuti uone mamwe akavhurika matabhu. Kuti uende kune imwe tab, ingo nyora pane yakadzikira tebhu. Kuti uvhare imwechete tebhu, tinya iyo X kana slide iyo tabu kuruboshwe kana kurudyi kuti uvhare iyo.
Uye nepo Safari iine fomati yakanyatsoita mushe yekutarisa, haugone kuvhara ese tabo kamwechete, kusiiwa kunogumbura kwevamwe. Asi mu Chrome iwe unogona, tinya iyo tabo icon inoteverwa neImenu icon (iwo akamira madhi) uye sarudza Vhara tabo dzese.
Google Chrome ine chinonakidza chiitiko icho inokutendera kuti usvitse pane chero chikamu chewebhu peji nekutepa nzvimbo yacho kaviri unoda kuonei. Izvi zvinoshanda kwazvo kana iwe uri kuyedza kuswededza mukati pamufananidzo pane peji rewebhu rakazara zvinyorwa. Asi inoshandawo kwazvo kumavara akavakirwa mapeji zvakare. Kana paine peji rine yakawanda misoro uye zvidiki zvinyorwa iwe unogona kuswededza mukati mundima nekukasira kaviri pombi kana pini kuti uswededze mune imwe nharaunda.
Iyo mbiri pombi yeku zoom ficha chete inoshanda pane saiti uye mapeji ewebhu asina mobile version. Saka kana iwe uri kutarisa kune mawebhusaiti aive akagadzirirwa-desktop uye asina kugadzirirwa nhare mbozha, unogona kushandisa chinhu ichi.
Kune vamwe vanhu kunze uko vasingazive iyo incognito mode yeiyo Chrome browser. Asi zvakanyanya kana iwe ukavhura tab muIncognito, hapana imwe yedata rako rekubhurawuza ichachengetwa munhoroondo yako uye hakuzovi nemakuki anochengetwa. Kuti uvhure incognito tab, tinya menyu menyu uye sarudza Nyowani Incognito Tab.
Kuenda incognito hazvireve kuti wave kusingaonekwe. Semuenzaniso, kana iwe uri kubasa, kuvhenekera incognito pane hakuite zvese zvaunoita "incognito" kuchikwata cheIT. Zvakangoita chivimbiso chekuvanzika kwako padhesiki rako pachako. Izvo zvinobatsirawo kwazvo kana mumwe munhu achishandisa komputa yako kuwana Gmail kana Facebook. Panzvimbo pekunge wabuda mumaakaundi ako, iwe unongovhura hwindo re incognito kwavari uye ivo vanogona ikozvino kupinda neruzivo rwavo vasina kusiya ruzivo rwavo pakombuta yako.
"Mireza" yeChannel yedesktop bvumira super simba tweaks mubrowser. Iko kune toni yemireza inowanikwa pane desktop uye zvakare yeApple zvishandiso, asi kwete zvakanyanya kune iOS. Kunyangwe pangasave nezvakawanda, pane mashoma aripo. Rangarira izvo mireza inoedza, saka kana iwe usingazive izvo zvaari, zvirinani usashandise.
Kana iwe ukasangana newebsite iwe yaunoda chaizvo kugovana nemumwe munhu, Chrome inoita kuti zvive nyore kwazvo kuzviita. Pese paunonzwa kuda kugovana, pombi paMenu icon (matatu akamira madonhwe) uye tinya pane Share icon. Kubva ipapo pop-up hwindo ichaonekwa iyo inokupa iwe yakanaka runyorwa rwekugovana sarudzo senge email, Facebook, Twitter, Zvinyorwa uye Meseji.
Google Apps nekutadza
Chrome inobvumira zvinongedzo uye zvimwe zvinhu izvo vhura muGoogle maapplication nekutadza. Iwe unogona kuwedzera zvimwe zvinhu kune iyo app runyorwa uye bvumidza mamwe maapplication muZvirongwa. Tinya pane iyo icon icon uye enda ku Zvirongwa -> Google Apps uye shandisa kana kumisikidza Google mafomu ayo anozotangwa chero chinongedzo chinoenderana nechishandiso chiripo.
Ini ndinonakidzwa chaizvo naSiri semubatsiri wega, asi mutsvaki wekutsvaga weGoogle anga achigara achinyatsoita uye achikurumidza kutora izvo zvandiri kuedza kutaura. Iye zvino hauchade kurodha pasi app yeGoogle Kutsvaga iyo. Unogona kushandisa iyo yakavakirwa-mukati kutsvaga kwezwi mu Chrome nharembozha. Ingo rova ​​bara yekutsvaga, ichiteverwa nepombi pane maikorofoni. Iti ako ekutsvaga parameter uye Chrome ichagadzirisa zvimwe zvese.
Kana Chrome ichiziva webhusaiti iwe yauri kukumbira zvinokutora iwe zvakananga kune iro chete peji. Kune mamwe ese emibvunzo yako yekutsvaga inongovhura peji reGoogle mhedzisiro.
Bvumira desktop version
Kana iyo nharembozha yesaiti isiri izvo zvaunotarisira, unogona kugonesa saiti yedesktop pane. Tinya pane icon yeMenu uye sarudza Kumbira saiti desktop kubva pane runyorwa saiti. Dzimwe nhare mbozha dzemasaiti dzinobvisa zvinyorwa kana kuzviisa mune yakasarudzika menyu kuti zvirinani zvirinani skrini. Vanhu vazhinji vanogonesa iyo desktop desktop yesaiti kuchengetedza kujairira uye kuziva kwekuwana zvimwe zvinhu zvesaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » 10 matipi ekufamba neGoogle Chrome pane iOS
PaPC ini ndinoda Chrome, asi pa iPhone ini ndinoda Dolphin kana Puffin zvakanyanya, zvinoita kunge kwandiri kunge mabhurawuza ari nani nekuti anotakura mapeji nekukurumidza uye Dolphin inogona kuvharidzira kushambadza zvakanaka. Ndinovakurudzira zvikuru.
Pindura kune dudSeven
Safari ine kristall inovhara kushambadza kwese chaizvo, chinhu chete chisipo iS Safari Google-dhizaini muturikiri uye kunatsiridza mabhukumaki nemifananidzo yavo.
Ini handikwanise kuverenga chinyorwa chinotanga neizwi Habemos
LegbaCore, kuwanikwa kutsva kwaApple kwakaitika munaNovember
Gene Munster: Apple Watch modhi S ichauya munaKurume